Iibhloko ze-AutoCAD dwg-ngaphezulu kwe-12,000 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iibhloko ze-AutoCAD dwg-ngaphezulu kwe-12,000
Iibhloko ze-AutoCAD dwg-ngaphezulu kwe-12,000
Kwi-Intanethi kukho iindawo ezahlukeneyo zokukhuphela iibhloko ze-AutoCAD ze-dwg. IiPortalbloque yenye yeentandokazi zethu.
Ukuyila KwiiPalloblocks Kuyinto elula, kodwa inokwenza oko umveleli ecinga ngayo:
"Ziphi iibhloko ze-AutoCAD dwg, ukuze uzikhuphele"
Imibutho yeebhloko ikwahlulo kwaye lolu luhlu olubanzi:
I-AutoCAD ivimba i-dwgiinkcukacha ezakhayo yokugquma, izinyeliso kunye ukuvalwa, Ukuchwela kunye nentsimbi, CPI, igqunyiweyo, iinkcukacha khazi, izinyuko, izakhiwo eziphathekayo, imithi kunye nentsimbi, izixhobo zokwakha, prefabrication, kwisimo, olungaphambili candelo kunye screeds.
izibonelelo ukuphakamisa, ukufudumala, umoya, umbane, umbane, iipilisi, iigesi, iimoto, izibane, ucoceko, ukhuseleko, i-telecommunications, umoya wokungenisa umoya kunye nokugwema.
ifanitshala kunye neebhloko zococeko ifenitshala ikhitshi, maziko, umhombiso, igumbi lokulala, iitafile igadi, imidlalo igumbi, egumbini kunye nezempilo, kwakunye nempahla ukusetyenziswa zorhwebo mveliso ezifana: bha, iwayini, Buffet, ikhitshi, izixhobo mveliso zonyango, umthambo, ofisi, panificadora , umgcini wezinwele, ubuhle be-salon.
iibhloko zocwangciso lwedolophu ipaki, ezemidlalo, iinkcukacha zomsebenzi zembambano, iimpawu zomgwaqo, ifenitshala yesitalato kunye nedama lokubhukuda
ezempilo kunye nezokhuseleko Ezingafunwayo, banikwe, propping kunye formwork, ukudilizwa, umbane, ubutyobo, ukhuselo ngokuhlangeneyo kunye iindidi zabasebenzi.
ukuthutha emoyeni, iinqanawa, izishishini, umkhosi kunye nomhlaba.
iingcango kunye neefestile bayavuswa, izitshixo, iihenjisi, nezibambo ezaphukileyo, izakhelo, umgangatho kunye neefestile: ukuphakama, umgangatho kunye nophahla iifestile.
Izicwangciso ze-AutoCAD ze-dwg abantu kunye nezilwanyana imisele, ezemidlalo, amaqela, amadoda, abafazi, nabantwana, izibini, njalo njalo, kwaye izilwanyana ezifana iintaka, amahashe, iibhokhwe, iihagu, imivundla, njl
iibhloko zotyani imithi, amahlathi, iintambo, izimbiza kunye namatye, kwisicwangciso kunye nokuphakama.
i ntetho iibhokisi, iitheyibhile, izikrini zesikrini, iikhokiti kunye namacwecwe
ukufikeleleka Imizobo, ukuphakama, ukuhamba ekhaya, izitepsi, iipampu, iipulatifomu
iimephu kunye nesitalato iimephu zamazwe avela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kunye nezitalato zedolophu
iimpawu umlilo, iintolo, ulwazi, amanqanaba, i-nortes, ingozi, izibhengezo, iimpawu zendlela, iimpawu
izixhobo zokwakha i-bulldozer, i-mixer ekhonkrithi, i-compactor, i-crane, abapaki bemi mini, i-loader kunye ne-mixer, i-backhoe
izesekeli kunye nezinto izixhobo eziphathekayo ekhishini, i-ofisi kunye neofisi, iipatethi, i-ashtrays, umhlobiso, izixhobo, izibane, i-telephony, izixhobo zokuhlola
Ukongeza, abantu basePortalbloque baphinde bathengise ii-CD ezimbini kunye nengqokelela yeebhloko ezingaphezulu kwe-12,000 ngee-49.95 zeyuro ... Nangona iibhloko zinokukhutshelwa kwisiza, isithembiso asibi, phantse iibhloko ezingama-250 ngeYuro nganye. [/ sociallocker]
Bonjour, ucela izixhobo okanye ii-objethi ze-2D ze-autocad kunyango lwe-boulangerie. Merci
U-HOLA wonke umntu njengoko ndifumana le qoqo yeqoqo
Ewe ndiyifumene, ndizoyibona xa ndibuyela kwimpucuko ... ndiyathemba ukuba unexesha
Utitshala othandekayo g! Wathunyelwa kumhleli (kwi) geofumadas.com ngokunxulumene nokubala kwi-Excel ye-UTM ukusuka kumacandelo anqamlezileyo aphakanyisiweyo kunye nenqanaba leetraffic ukuze kamva angene kwi-Civil 3D…. Ndingavuya kakhulu xa undinceda ukuba ndibaqonde, basebenzise ifomula yokubala
Eso lo puedes comprar con una tarjeta de crédito de tu país o también con una de débito que te haya dado tu banco y que soporte compras internacionales. Cualquier visa electrón soporta eso
yeny Ricard uthi:
I ukuxhasa uluvo wezakhiwo Carlos Escobar njengoko Venezuelans kuthenga ezi phakheji kuba Venezuela iidola kodwa akazange abe ccomprarlos e bolivars (lwemali Venezuela)
nceda! Ndiyathemba ukuba uncedo kum ndifuna ukucacisa umxholo weebhloko kodwa andazi apho unokuzikhuphela khona! Nceda UNCEDE!
Molo, okokuqala ndifuna ukuvuyisana nawe kweli phepha. Nanini na xa ndinamathandabuzo malunga nendlela yokwenza ibhloko, ndiye ndijike kuwe kwaye… ukuthandabuza kusonjululwe.
Ngeli xesha ndifuna iimpawu zokunxibelelana ngee-telecommunication, ii-antennas ngokukhethekileyo, kwaye andinakuzifumana. Ngaba umntu unokundinceda?
Ndiyabulela kwaye ndivuyisana ngomsebenzi wakho.
Pedro Bastard uthi:
Enkosi ... enkosi kakhulu ... Ndifumene iimpendulo ezonelisayo ngale portal ... Ndimema abasebenzisi be-intanethi ukuba basebenzise esi sithuba ... izakubanceda ...
Enkosi ... enkosi kakhulu .. Ndifumene iimpendulo ezonelisayo ngale portal ... Ndimema abasebenzisi be-intanethi ukuba basebenzise esi sithuba ..
Ndingathanda ukwazi indlela yokukhuphela inkqubo yebhloko
UCarlos Arturo Escobar Owen uthi:
Kule ndawo izinto ezinomdla kakhulu, kodwa ke xa kufuneka hacelos ntlawulo zeedollar, kowethu, njl, kwilizwe kwam kube nzima ukwenza olu hlobo transacciones.- Kufuneka ukunika indlela lokuvula, wena, i-akhawunti kweli lizwe , ngoko ndithi, ngokuba ndibona isiqulatho umdla, ndiyaqikelela unogumbe ngabantu abanomdla ukuze kuphuculwe ukuba siya kuba enrolandonos zabo Siyabonga filas.-
UVanessa Espin uthi:
Ndingumgijografi kwaye ndingathanda ukwazi indlela endiyenza ngayo ukufaka idatha kwipayipi; Ndiyadinga ukusingathwa okumele kwenziwe kwinqanaba. Kungenxa yokulungiswa kwethemplate yamanzi okuNwa.
Mna ndingelilo wezakhiwo kodwa sy draftsman kunye topographer njengam ukuthoba civicad enze phambi kwam fata ezi iibhloko kwangaphambili lungayivuyela naluphi na ulwazi
UKUQHUBA UKUBHALISA NJENGOBA NDENZA UKUZIPHUMA
I miguel kwaye ndiyathanda i-cacauetes
amathuba okuba uthi:
Yo soy jose maria y me gustan las manzanas
URaul Mendoza M. uthi:
Sawubona, ndiyakuvuyisela iibhloko, ndingathanda omnye, Ndingumvelisi kwaye ndiyathemba ukukwazi ukusebenzisana neli candelo kwithuba elithile.
Luis Eduardo Ortiz uthi:
yonke into ekhoyo apha yandinceda gqitha, ndiyathemba ukuba bayaqhubeka bepapasha kwaye sihlala sikhumbula
Sawubona, ndingathanda ukukhuphela igalari yeebhloko ze autocad, ndiyakuyixabisa ngokwenene ukuba unokunceda. Ndingumdwebi wezinto zokuqala.
BERNABE BOLAÑOS TECLA uthi:
UKUQHUBANISWA KWE-SITE OKUQHELEKILEYO KUNYE NOKUKHENZISWA KWEENKQUBO EZIKHENZILEYO KWENKQUBO YEBHAYIBHILE
Sawubona, ndingumfundi wezakhiwo kwaye ndifuna iibhloko zeofisi kwi-AutoCAD, ndibubele ukuba undixelele ukuba ndiyakwazi ukuwafumana kweli phepha.
UJonathan Vazquez uthi:
Sawubona, ndingathanda ukukhuphela igalari yeebhloko ze autocad, ndiyakuyixabisa ngokwenene ukuba unokunceda.
Uxolo yam ibhokisi i-ocaamano2000yahoo.com.ar, Siyabonga
U-HELLO, NDAKHUMBULA I-TILE BLOCK (UKUBA UKUFANELELWA KWE-FRANCH) KWI3D, UKUBA UMUNYE UNCEDINCEDA NGO Mxholo, ndiyakuncoma kakhulu.
Ndingumfundi we-master in ingeriaeria, siepre Ndiya kutyelela eli phepha ndifuna uncedo kwaye ndihlala ndiyifumana, ndivuyisana
Ndingathanda ukukhuphela le nkqubo
GUILLERMO JOSE uthi:
INKOSI NDIYE NENGOBA I-ARCHITECTURE A NDIYE I-ARCHITECT NDIYE DIBUJANTA
KUNYE NDIKHUMBULA AMAHLA